Sucuudiga Oo Markii Ugu Horreysay Qirtay Dilka Weriye Jamaal Khashgooji – somalilandtoday.com
(SLT-Riyadh)-Warbaahinta dowladda Sucuudiga waxay sheegtay in weriye Jamaal Khashgooji uu geeriyooday kaddib markii uu ku dhintay dagaal ka dhacay qunsuliyadda gudaheeda xilli uu halkaasi joogay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in waxa dhacay aanan la aqbali doonin balse Sucuudiga uu yahay saaxib dhaw.
Madaxwayne Trump ayaa sidoo kale ku tilmaamay tallaabo muhim ah oo loo qaaday xarigga shaqsiyaadka,wuxuu Sucuudiga ku ammaanay tallaabada degdeg ah ay qaadeen.
Wuxuu intaasi ku daray madaxwayne Trump ‘inkastoo cunaqabatayn ay tahay tallaabo Mareykanka u furan balse tallaabooyiin noocaas ah ay aad u dhaawacaysaa dhaqaalaha Mareykanka’.
Waa markii ugu horreysay uu Sucuudiga ku qirto inuu ka dambeeyay dilka weriye Jamaal Kashgooji.
Waxaa lagu soo warramaya in macluumaad sirddoon ah ay soo gudbiyeen Turkiga uu Sucuudiga ka caawiyay baaritaanada.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionCiidammada Turkiga ee baaritannada ka waday qunsuliyadda Istanbul
Jamaal Kashgooji waxaa dad ugu war dambeysay labadii bishan xilli uu waraaqo kasoo qaadanayay qunsuliyadda Sucuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Mar sii horreysay, booliska Turkiga waxay baaritanno xooggan ka wadeen gudaha qunsuliyadda, saraakiil aanan magacooda la shaacinin ayaa sheegay in maydka weriyaha lagu tuuray kayn halkaasi ku taalla.
Bayaan kasoo baxay dacwad oogaha guud ee dowladda Sucuudiga ayaa lagu sheegay in dagaal uu qunsuyliyadda ku dhexmaray weriye Jamaal Kashgooji iyo dad halkaasi ay ku kulmeen ay dhalisay dhimashadiisa.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionSawirka Jamaal Khaasoqji oo nin ka mid ah dadkii Istanbul mudaharaadka ka dhigay sito
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionHatice Cengiz, waa gabadha Turkiga ah ee u doonanayd Jaamal Khaashoqji, ayaa booliska ku wargelisay in la waayey
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionNin sii gelaya Qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionKhaashoqji boggiiska Twitter-ka waxa ku taxan 1.6 milyan oo qof
[Khaashoqji oo ka hadlaya hab dhaqanka Maxamed Bin Salmaan ayaa wuxu qoray] “Waxaan gurigaygii, qoyskaygii iyo shaqadaydiiba uga firxaday waa in aan aragtidayda cabiray” waxaanu intaa ku daray “in aan waxa jira ka aamusaana waxay ila noqontay in aan khiyaamaynayo dadka jeelka ugu jira xorriyadda hadalka. Haatan waan hadli karaa oo waxaan haystaa fursad aanay dad badani haysan”.
” Waxaan leeyahay Maxamed Bin Salmaan sida Putin buu u dhaqmayaa oo caddaaladiisu waa la jiifiyaana bannaan” ayuu ku yidhi maqaal uu ku qoray Washington Post.